फिफा वर्ष खेलाडीको छिनोफानो आज, को बन्ला यो वर्षको उत्कृष्ट ? « Sansar News
फिफा वर्ष खेलाडीको छिनोफानो आज, को बन्ला यो वर्षको उत्कृष्ट ?
६ कार्तिक २०७४, सोमबार ०९:३६
६ कात्तिक, काठमाडौँ । फिफा वर्ष खेलाडीको छिनोफानो आज हुदैँ छ । फिफा वर्ष खेलाडीको यो संस्करणमा रियल म्याड्रिडका फरवार्ड रोनाल्डो, बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी तथा पिएसजीका नेयमार उत्कृष्ट तीनमा परेका छन् । मतका आधारमा उत्कृष्ट तीन जना मध्येका एकले वर्ष खेलाडीको उपाधि जित्ने छन् ।
यो वर्ष फिफा वर्ष खेलाडीको दैडमा रियल म्याड्रिडका रोनाल्डो अगाडीइ देखिएका छन् । रियललाई च्याम्पियन्स लिग तथा लालिगको उपाधि जिताउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका रोनाल्डोलाई सम्भावित विजेताको रुपमा हेरिएको छ ।
यसै गरि वार्सिलोनाका फरवार्ड लिओनल मेस्सीलाई वर्ष खेलाडीको अर्को सम्भावित खेलाडीको रुपमा हेरिएको छ । गत वर्ष लालिगामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै गोल्डेन बुट जितेका थिए यस्तै पिएसजीका फरवार्ड नेयमारले समेत गत सिजन वार्सामा रहँदा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए ।